Koorsooyinka Waxbaridda Online -ka ee ugu sarreeya ee Koonfur Afrika 11
Koorsooyinka Waxbaridda Online -ka ee ugu sarreeya ee Koonfur Afrika
Koofur Afrika waxaa ka jira koorsooyin wax-baris onlayn ah oo aad u qaadan karto shaqo waqti-dhiman ah si aad u kasbato dakhli dheeri ah oo aad ugu tababarto xirfadahaaga waxbaridda.
Waxbarashada tooska ah iyo tan fog-ba hadda ma aha wax cusub, si dhakhso ah uma aysan qaadin hay'adaha qaarkood laakiin faafitaanka Covid-19 wuxuu ku qasbay iskuul walba inuu qaato. Iyagu ma aysan lahayn wax doorasho ah maadaama noloshu ay tahay inay sii socoto inkastoo masiibada ay weli ballaaran tahay. Sababtoo ah arintaan darteed, barashada khadka tooska ah iyo kan masaafada ah waa inay fulisaa dowlada wadamada qaarkood iyo gudiga waxbarashada ee hay'adaha.
Waxbarashada tooska ah waxay hubaal tahay inay leedahay faa'iidooyinkeeda marka la barbar dhigo hab -dhaqameedka wax -baridda iyo barashada, waa dabacsanaan, walaac yar, waxaad dooran kartaa meesha aad wax ka baran lahayd, way ku habboon tahay, waxaadna baran doontaa si ka wanaagsan sidii hore maadaama aysan jiri doonin wax ka jeediya iyo wixii la mid ah. Faa'iidooyinkan ayaa sidoo kale khuseeya waxbaridda onlaynka ah.
Halkii aad ku boodi lahayd suud oo aad toddobaad kasta u xidhnaan lahayd shaqada, waxaad ku tuuri kartaa oo kaliya inaad gashato xirashada guriga caadiga ah, hor fadhiiso kombiyuutarkaaga, dhigto ardayda, oo lacag samaysato. Macallin ahaan, waxaad sidoo kale ka baxsan doontaa culeyska ah inaad dugsiga aado maalin kasta waxaadna ku raaxeysan doontaa raaxada ka imaanaysa ka shaqeynta guriga.
Waxbaristu waa u xiiso iyo xamaasad xiiso leh kuwa u hamuun qaba, ka sokow waxa ku kalifaya inaad shaqo qabato ama gasho xariijin xirfadeed oo aadan aad u jeclayn, taasi waa bilowga walaaca.
Si kastaba ha noqotee, haddii waxbariddu adiga kuu soo jiidanayso oo aad rabto inaad bilowdo xirfad mihnadda, markaa waa inaad codsataa kuleejka bulshada ee laba sano ah ama kulliyadda waxbarashada oo aad raacdaa shahaadada waxbaridda, diblooma, ama shahaado. Laakiin haddii aad rabto inaad kordhiso fursadahaaga inaad ku shaqaysato mushahar sare, markaa waa inaad ku sii wadataa shahaadada koowaad ee jaamacadda ama sayidyada barnaamijka barista.
Sidoo kale, sida barashada ardayda onlaynka ah iyo ardayda barashada koorsooyinka iyo dhammaystirka barnaamijyada khadka tooska ah, shaqsiyaadka doonaya inay galaan xirfadda macallinnimada ayaa si isku mid ah koorsooyinka waxbaridda ugu qaadan kara khadka tooska ah xagga dhammaystirka shahaadada ay rabaan. Markaa, ama waxaad ku baran kartaa shahaadadaada waxbaridda khadka tooska ah (dhaqameed) ama koorsooyinka tooska ah, ha welwelin, shahaadooyinka la bixiyay waa isku mid
Koorsooyinka waxbaridda ee onlaynka ah waxay u shaqeeyaan dadka doonaya inay ku kasbadaan shahaado barashada iyo waliba kuwa horay u qaatay shahaado. Kuwii hore u qaatay shahaado oo horeba u ahaa macallimiin shaqaynaya, isqorista fasalka waxbaridda ee internetka waxay nadiifin karaan xirfadihii ay haysteen, waxay bari karaan hababka waxbaridda ee casriga ah oo ka fiican oo ay u dalban karaan wax -barid wax -ku -ool ah, oo iyaga ka dhigi kara xitaa kuwo xirfad leh.
In kasta oo maqaalkani ku jiro koorsooyinka waxbaridda onlaynka ah ee Koonfur Afrika, wada -xaajoodyada kore waxay u shaqeeyaan qof walba. Haddii aadan joogin Koonfur Afrika oo aad rabto inaad ku biirto koorsooyinka tooska ah, la xiriir dugsiga bixiya barnaamijka si loo hubiyo inay aqbalaan ajaanibta barnaamijka. Haddii aysan aqbalin, si fudud uga raadi koorsooyinka waxbaridda tooska ah ee waddankaaga adoo adeegsanaya Google, wax ka yar shan daqiiqo, waxaad ka heli doontaa dhammaan jawaabaha aad u baahan tahay shabakadda.
Markaad baranayso shahaadadaada waxbaridda waxaad ku hawlan kartaa barista ardayda onlaynka ah si aad naftaada u hormariso oo aad ugu fiicnaato waxaad samayso. Maalmahan, waxaa jira aalado badan oo wax lagu baro internetka oo aad ka bilaabi karto safarkaaga waxbaridda oo aad lacag ku kasban karto inta aad samaynayso. Eeg, waxba ma luminaysid.
Koonfur Afrika, waxaa ku yaal in ka badan 25,000 dugsiyo dowladeed, in ka badan 400,000 oo macallimiin ah ayaa shaqeeya oo qaata R210,000 ilaaR618,000 sanadkii. Macalimiinta haysta shahaado afar sano ah iyo REQV 14 waxay kasbadaan inta ugu badan inta u dhaxaysa R278,000 ilaa R618,000, halka macalimiinta REQV 13 ay helaan ugu yaraan inta u dhaxaysa R210,000 ilaa R465,000.
1 Waa maxay Koorsada Waxbarista onlaynka ah ee Koonfur Afrika
2 Yaa Codsan Kara Koorsooyinka Waxbaridda Online -ka ee Koonfur Afrika
3 Shuruudaha lagu Codsan karo Koorsooyinka Waxbarista ee onlaynka ah ee Koonfur Afrika
4 Koorsooyinka Waxbaridda Online -ka ee Koonfur Afrika
4.1 1. Waxbarashada Dadka oo dhan: Naafada, Kala duwanaanta, iyo Ka -mid -noqoshada
4.2 2. Shahaadada Sare ee Baridda Wajiga Aasaasiga ah
4.3 3. Shahaadada Sare ee Baridda Wajiga Dhexe
4.4 4. Shahaado Sare ee Wajiga Sare Ingiriisiga Barashada Luqadda Dheeraadka ah
4.5 5. Aasaaska Waxbaridda ee Horumarinta Carruurnimada Hore
4.6 6. Xirfadaha La -talinta Macallimiinta
4.7 7. Edtech ee Fasalka dhexdiisa
4.8 8. Aasaaska Barashada Darajada R
4.9 9. Baro Baridda Onlineka
4.10 10. Taageerida Barashada Sixitaanka Barashada
4.11 11. Dibloomada Qaranka ee Horumarinta Carruurnimada Hore
5 Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Koorsooyinka Waxbaridda onlaynka ah ee Koonfur Afrika
Waa maxay Koorsada Waxbarista onlaynka ah ee Koonfur Afrika
Koorso waxbarid oo toos ah oo ku taal Koonfur Afrika waa koorso ay qaataan ardayda ku sii wadata shahaadada aagga baridda si ay u qanciyaan shuruudaha barnaamijka. Waxa kale oo qaadan kara kuwa hore u kasbaday shahaadada waxbaridda oo horeba u ahaa macallimiin si buuxda u shaqaynaya si ay u nadiifiyaan xirfaddooda oo ay u bartaan xeelado waxbaris oo cusub.
Yaa Codsan Kara Koorsooyinka Waxbaridda Online -ka ee Koonfur Afrika
Dadka ka dalban kara koorsooyinka waxbaridda onlaynka ah ee Koonfur Afrika waa ardayda doonaya inay qaataan xirfadda macallinnimo iyo kuwa horeba macallimiinta u ahaa laakiin waxay raadinayaan fursado ay ku cadaydaan xirfadahooda hore.
Shuruudaha lagu Codsan karo Koorsooyinka Waxbarista ee onlaynka ah ee Koonfur Afrika
Shuruudda ah in la dalbado koorsooyinka waxbaridda onlaynka ah ee Koonfur Afrika waa in la qabto Shahaadada Sare ee Qaranka (NSC) oo leh ugu yaraan 50% luqadda waxbaridda iyo barashada iyo ugu yaraan 40% xisaabta ama 50% aqoonta xisaabta.
Si kastaba ha noqotee, boqolkiiba gudbinta halkan lagu muujiyey way ku kala duwanaan kartaa dugsi ilaa dugsi, maaddaama koorsooyinka waxbaridda tooska ah ee Koonfur Afrika ay si toos ah u bixiyaan jaamacadaha, sidaa darteed, waxay go'aamiyaan waxa ay yihiin shuruudaha. Waxaad had iyo jeer la xiriiri kartaa hay'adda martida loo yahay si aad wax badan uga ogaato shuruudaha barnaamijka gaarka ah.
Koorsooyinka Waxbaridda Online -ka ee Koonfur Afrika
Waxbarashada Dhammaan: Naafonimada, Kala duwanaanta, iyo ka mid noqoshada
Shahaadada Sare ee Baridda Wajiga Aasaasiga ah
Shahaado Sare ee Baridda Wajiga Dhexe
Shahaado Sare ee Wajiga Sare Ingiriisiga Barashada Luqadda Dheeraadka ah
Aasaaska Waxbaridda ee Horumarinta Carruurnimada Hore
Xirfadaha La -talinta Macallimiinta
EdTech ee Fasalka dhexdiisa
Aasaaska Waxbarashada Fasalka R
Baro Waxbaridda onlaynka ah
Baridda Taageeridda Barashada Hagaajinta
Dibloomada Qaranka ee Horumarinta Carruurnimada Hore
1. Waxbarashada Dadka oo dhan: Naafada, Kala duwanaanta, iyo Ka -mid -noqoshada
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka waxbaridda tooska ah ee Koonfur Afrika oo ay bixiso Jaamacadda Cape Town iyada oo loo sii marayo FutureLearn - oo ah madal barashada internetka ah. Koorsada waxaa si gaar ah loogu talagalay macallimiinta, waalidiinta, iyo xirfadleyda si ay uga caawiso inay ogaadaan habab kale iyo xeelado wax ku ool ah si waxbarashada looga dhigo mid loo dhan yahay, gaar ahaan meelaha ay kheyraadku xaddidan yihiin.
Koorsadu waa 6 isbuuc, 100% waa online waxaadna wax ku baran kartaa xawaarahaaga, waana bilaash laakiin haddii aad rabto dheefo dheeraad ah waxay ku kacday $ 49. Koorsada waxaa loogu talagalay macallimiinta iyo xirfadleyda haddii aadan dhammayn barnaamijka shahaadadaada waxbaridda oo aadan ku baran dhammaan koorsooyinka kale ee hoose waxay noqon karaan adiga.
2. Shahaadada Sare ee Baridda Wajiga Aasaasiga ah
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka waxbaridda tooska ah ee Koonfur Afrika. Waa 100% barnaamijka shahaadada sare ee khadka tooska ah ee macallimiinta aqoonta leh ee ay bixiso Jaamacadda Gobolka Xorta ah. Ku -tababarayaasha macallimiinta ee doonaya inay horumariyaan xirfadahooda waxbaridda waa inaysan seegin fursadan samaynta iyaga oo aan ka tanaasulin mas'uuliyadaha jira.
Barnaamijku wuxuu soconayaa 10 toddobaad, waqtigaasna, macallimiintu waxay ku hormariyaan heerkooda wax-barashada iyaga oo kordhiya aqoonta, laylisyada xallinta dhibaatooyinka, iyo codsiyada wax ku oolka ah. Adigoo adeegsanaya xirfadahaaga cusub, waxaad ku bilaabi kartaa inaad isla markiiba ku dabaqdo fasallada dhexdiisa waxayna sidoo kale kuu qalabeysaa dallacsiin ama fursado shaqo oo ka fiican.
3. Shahaadada Sare ee Baridda Wajiga Dhexe
Kani waa mid kale oo ka mid ah koorsooyinka waxbaridda tooska ah ee Koonfur Afrika oo ay sidoo kale bixiso Jaamacadda Gobolka Xorta ah. Barnaamijku waa mid horumarsan oo ka sarreeya kan sare waana 100% sidoo kale khadka tooska ah, sidaa darteed, si aad uga qaybgasho, uma baahnid inaad safarto ama aad u muuqato kulan xiriir. Ma jiraan imtixaano rasmi ah midkoodna, taa beddelkeeda, horumarka ardayda waxaa lagu cabiraa qiimeynta internetka.
4. Shahaado Sare ee Wajiga Sare Ingiriisiga Barashada Luqadda Dheeraadka ah
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka waxbarista tooska ah ee tooska ah ee Koonfur Afrika oo ay bixiso Jaamacadda Xorta ah. Barnaamijka 10-toddobaad ah wuxuu ka kooban yahay 14 qaybood oo wadar ahaan ah 132 dhibco oo ardaydu ay tahay inay dhammaystiraan si ay u helaan shahaadada la aqoonsan yahay.
Barnaamijku wuxuu diiradda saarayaa sidii macallimiinta loogu qalabayn lahaa qalabkii looga baahnaa si hufan wax loogu baro Ingiriisiga iyo in si wax ku ool ah loola xiriiro inta laga hirgelinayo fasalka macluumaadka iyo farsamada isgaarsiinta. Dhamaadka barnaamijka, waxaad horumarin doontaa kartida ku -dhaqanka xeeladaha wax -barashada, waxaad siin doontaa jawaab celin wax -ku -ool ah bartayaasha, iyo waxyaabo kaloo badan.
5. Aasaaska Waxbaridda ee Horumarinta Carruurnimada Hore
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka waxbaridda onlaynka ah ee Koonfur Afrika oo ay bixiso Damelin Online, barnaamijka waxaa loogu talagalay macallimiinta xanaanada, dhakhaatiirta daryeelka carruurta, kalkaaliyayaasha, waalidiinta, iyo daryeelayaasha iyaga oo u soo bandhigaya aasaaska daryeelka carruurta gaar ahaan khuseeya dhalashada-4 sano jirka kooxda.
Barnaamijku wuxuu leeyahay 10 qaybood wuxuuna qaadanayaa 10 toddobaad si loo dhammaystiro, dhammaadka barnaamijka, waxaad baran doontaa waxa iyo sida wax loo baro oo loo helo faham adag oo ku saabsan siyaasadaha, aragtiyaha, iyo hababka wax loo baro oo loo qiimeeyo carruurta.
6. Xirfadaha La -talinta Macallimiinta
Xirfadaha La -talinta Macallimiinta waa mid ka mid ah koorsooyinka waxbaridda tooska ah ee Koonfur Afrika oo ay sidoo kale bixiso Damelin Online. Koorsadu waa 100% onlayn oo leh 11 qaybood, oo la dhammaystiray 11 toddobaad. Waa koorso bilow ah oo loogu talagalay macallimiinta dugsiyada hoose iyo kuwa sare si ay u siiso xirfadaha iyo fahamka si loogu diyaariyo macallimiinta inay ogaadaan goorta ay ardayda ama waalidiinta u gudbin doonaan xirfadlayaasha dibadda ee saxda ah.
7. Edtech ee Fasalka dhexdiisa
Edtech ee Fasalka dhexdiisa waa koorso ay tahay in macallin kasta ku boodo. Waxay macallimiinta ku qalabeysaa xirfado hababka waxbaridda ee hal -abuurka leh iyo sida loo adeegsado farsamooyinka jira si loo kaxeeyo fasalka waxbaridda wax -ku -oolka ah iyo isku xirka ardayda. Dhamaadka koorsada, kalsoonidaada inaad wax ku barato teknoolojiyadda soo baxaysa iyo inaad la shaqayso bartayaasha goobo cusub oo barashada shabakadaha aad bay u fiicnaan lahayd.
Koorsada waxaa lagu bixiyaa khadka tooska ah ee Damelin Online waana mid ka mid ah koorsooyinka waxbaridda tooska ah ee ugu sarreeya Koonfur Afrika. Waxay ka kooban tahay 11 qaybood waxaana la dhammaystiray 11 toddobaad.
8. Aasaaska Barashada Darajada R
Aasaaska Barashada Darajada R waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu sarreeya khadka tooska ah ee Koonfur Afrika, waxay leedahay 10 qaybood waxaana lagu dhammayn karaa toddobaadyada 10. Haddii aad rabto inaad maamusho xaruntaada xannaano -maalmeedka, kani waa koorsada ay tahay inaad ku tallaabsato si aad u hagaajiso xirfadahaaga maaraynta ee aagga horumarka carruurnimada, fahamto mabaadi'da iyo u hoggaansanaanta sharciyeynta si loo aasaaso xaruntaada xannaanada, oo aad barto siyaasadaha iyo hababka waaweyn ee ku lug leh iska diiwaangelinta xarun xanaano maalmeed.
9. Baro Baridda Onlineka
Waxbaridda onleenka ma aha mid fudud sida la yiri, waxyaabo badan baa dheela oo gebi ahaanba wuu ka duwan yahay habka waxbaridda ee dhaqanka ah. Kuwani waa xirfado ay tahay inaad lahaato macallin ahaan waqtigan casriga ah ee ay waxbarashada internetka caan ku tahay oo maadaama aad fasalka ku qaadanayso onlayn, waxay u dhowdahay inaad horeba u heshay xirfado wax ku ool ah.
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka waxbarista ee khadka tooska ah ee Koonfur Afrika oo loogu talagalay inay kugu hagto inaad ku dabaqdo aqoonta waxbarasho ee aad hore u tababbartay oo aad ugu wareejiso booska internetka. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ardaydaada fasallo kula qaadatid meel kasta, waqti kasta waana waxa nidaamka waxbarashada casriga ahi ku raaxaysto.
10. Taageerida Barashada Sixitaanka Barashada
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka waxbarista ee khadka tooska ah ee Koonfur Afrika si kor loogu qaado wacyiga, aqoonta, iyo isfahamka macallimiinta, waalidiinta, iyo daryeelayaasha ee ku saabsan caqabadaha kala duwan ee horumarka, dabeecadda, iyo bay'ada barashada carruurnimada, iyo marxaladda aasaaska.
Macallin ahaan, koorsadani waxay kaa caawin doontaa inaad fahamto ardaydaada iyo sida horumarkooda shaqsiyeed loo saamayn karo.
11. Dibloomada Qaranka ee Horumarinta Carruurnimada Hore
Liiskayagii ugu dambeeyay ee koorsooyinka waxbaridda onlaynka ah ee Koonfur Afrika waa Dibloomada Qaranka ee Horumarinta Carruurnimada Hore-barnaamij laba sano ah. Barnaamijku wuxuu aqoonsan yahay in tababarka waxbarashada carruurnimada hore ee leh ku -takhasuska arjiga Montessori uu u baahan yahay faham ballaadhan iyo xirfado kala duwan oo kala duwan iyo waliba dabeecado gaar ah oo carruurta.
Markaad dhammaystirto barnaamijkan diblooma, waxaad u shaqayn doontaa sidii barbaariye carruurnimada hore oo dhammaystiran oo Koonfur Afrika ah. Barnaamijka waxaa lagu bixiyaa onleenka Xarunta Montessori ee Koonfur Afrika.
Kuwani waa koorsooyinka waxbarista tooska ah ee tooska ah ee Koonfur Afrika oo haddii mid ka mid ah koorsooyinka aad xiiseyso, guji "Codso halkan" si aad u bilowdo.
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Koorsooyinka Waxbaridda onlaynka ah ee Koonfur Afrika
Ma ku baran karaa barashada khadka tooska ah ee Koonfur Afrika?
Haa, waxaad ku baran kartaa barashada khadka tooska ah ee Koonfur Afrika waxaadna ka soo qaadan kartaa 11 ka mid ah kuwaas oo lagu tilmaamay laguna falanqeeyay qoraalkan baloogga.
Waa maxay shahaadooyinka aan u baahanahay si aan macallin uga noqdo Koonfur Afrika?
Si aad u noqoto macallin aqoon u leh Koonfur Afrika, waa inaad dhammaysay afar sano oo ah shahaadada Bachelor-ka Waxbarashada ama wax u dhigma oo ay ku xigto hal sano Dibloomada Sare ee Waxbarashada, iyo inaad iska diiwaangeliso Golaha Barayaasha Koonfur Afrika.
Immisa ayay ku kacaysaa in macallin laga noqdo Koonfur Afrika?
Qiimaha noqoshada macallin ee Koonfur Afrika way ku kala duwan tahay dugsi ilaa dugsi, maadaama aad u baahan tahay inaad ku sii wadato shahaadada koowaad ee waxbarashada laakiin waxay u dhexaysaa R44,000 illaa R87,000 sannadka ugu horreeya.
Waa imisa macallimiinta Koonfur Afrika?
Macallimiinta Koonfur Afrika waxay qaataan celcelis ahaan mushaharka R258,060 sanadkii. Celceliska mushaharka bilowga ee macallinka Koonfur Afrika waa R182,500 sanadkii mushaharka ugu sarreeya wuxuu ka badan karaa R618,000 sanadkii.
Waa kuwee macallimiinta maaddooyinka ee looga baahan yahay Koonfur Afrika?
Macallimiinta luuqadda ee aqoonta u leh marxaladda aasaaska iyo macallimiinta xisaabta ee dhammaan heerarka ka hooseeya Fasalka 10aad ayaa aad looga doonayaa Koonfur Afrika.
15 Ways oo Ardayda Jabaaniiska ah loogu baro Ingiriisiga khadka tooska ah si ay faa'iido u helaan
17 Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo loogu talagalay Macallimiinta Horumarinta Xirfadeed
Shahaadada Masters ee Bilaashka ah ee Macallimiinta
18 Liiska Ugu Fiican Koorsooyinka Tababarka Macallimiinta
koorsooyinka interneedka Baro Xirfad Online Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo wax ku barta internetka
koorsooyinka waxbaridda tooska ah ee Koonfur Afrika
Previous Post:10 Iskuulada Caafimaadka ee ugu Fiican Florida oo leh Khidmadaha
Post Next:13 Dugsiyada Sare ee Boodhinka ah ee England ee Ardayda Caalamiga ah